Xukuumada Soomaaliya oo ka hadashay aragtida ee ka qabto Doorashadii shalay lagu Doortay Madaxweynaha Jubaland | Salaan Media
Xukuumada Soomaaliya oo ka hadashay aragtida ee ka qabto Doorashadii shalay lagu Doortay Madaxweynaha Jubaland
Wasiirka Arimaha gudaha iyo amniga Qaranka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay Doorashadii shalay ka dhacday Magaalada Kismaayo ee mdaxawenaha Jubaland State loogu doortay Hogaamiyaha Kooxda Raaskanbooni Sheekh Axmed Madoobe.
C/Kariin Xuseen Guuleed Wasiirka Arimaha Gudaha oo Qoraal soo dhigay Barta uu Twitterka ku leeyahay ayuu ku sheegay waxii shalay Kismaayo ka dhacay aysan aheen wax la aqbali karo marnaba aysan Dowlada Soomaaliya raali ka aheyn aqoonsana doonin.
‘’ Idaacadaha kaliya ayaan ka maqalnay in Shalay Magaalada Kismaayo lagu doortay Madaxweynaha Jubaland State mana ahan wax Dowlada ee raali ka tahay Doorashadaasi iyo waxii halkaasi kasoo baxay , waxaana ka xunahay in arintan lagu soo beegay Xili Xukuumada ee guddi u magacawday Shalay arimaha Jubooyinka in ee xaliyaan ‘’ ayuu yiri Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya.
Wasiirka ayaa xusay in marnaba ogolaan doonin natiijadii shalay kasoo baxday Shirkii KIsmaayo kasocday uu ku tilmaamay mid xadgudub ah oon waafaqsaneen shuruucda Dalka , Dowlada Soomaaliya aysan u dul qaadan doonin waxa kasocda Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose.
Hadalka Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili maalintii shalay Shirar kala duwan oo Magaaladaasi ka dhacay Madaxweynaha Jubaland State Siyaabo kala duwan loogu doortay Sheekh Axmed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Col. Barre Aadan Shire Hiiraale taa oo dhalisay durba qilaaf iyo Xiisado Cusub in Kismaayo ka oogmaan.